Wasiir ku-xigeenka caafimaadka oo booqday Jaamacadda SIU “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Ujeedka kormeerkan uu Wasiir ku-xigeeka Wasaaradda caafimadka ee xukuumada fedraalka Soomaliya ahna ku-simaha Wasiirka mudane Cismaan Maxamed Cabdi Daalo uu ku tagay xarunta Jaamacadda SIU gaar ahaan qeyb kuliyadda Caafimadka ee magaalada Muqdisho ayaa ah sidii Wasaaradda Caafimadka ay wax ugu ogaan laheyd Tayada waxbarshada caafimadka ee Kaamacadaasi.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Caafimadka ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa kormeer ku sameeyay fasalada ay arday wax kubartaan iyo qeybaha lagu tababaro si loo xaqiijiyo tayada waxbarashada dhinaca caafimaadka si loo soo saaro dhaqaatiir tayo leh.
Prof Daaha Ombali Axmed oo u dhashay dalka Suudaan, isla markaana bara ka ah kuliyadda Caafimadka ee Jaamacadda SIU oo goobta ka hadlay ayaa faah-faahin kabixiyay ahmiyadda uu caafimadka u lee yahay bulshada.
“Waxaan ugu horeyn uga mahad celinayaa Kaamacadda SIU sida wanaagsan ee fursadan ay ii siisay oo ku aadan sidii adeegyada caafimaad ee bulshada loo horumarin lahaa, waana muhiim Arrintaan” sidaasi waxaa yiri barre Ajnabi ah oo kuliyadda caafimaadka ee Jaamacadda SIU wax ka dhiga.
Hormuudka Jaamacadda SIU Prof Yaxye Cali Ibraahim ayaa madasha ka sheegay in Jaamacadda ay hiigsaneyso sidii ay usoo saari laheyd
dhaqaatir taya leh oo buuxin kara baahida adeegyada caafimad ee dalka ka jira.
“Waxay Jaamacadda hiigsaneysaa in ay noqoto xarun soo saarta arday wadato aqlaaqiyaadka aas aasiga ah ee waxbarasho ku filan iyo xirfadda ardaydaasi oo la rabo mustaqbalka in naftooda iyo tan Qarankaba in ay ka geystaan horumar la taaban karo, arintaas majirto cid
kaligeed sameyn karto waxey u baahan tahay in ay sameeyaan dad kala duwan iyo Dalal kala duwan” ayuu yiri Hormuudka Jaamacadda SIU Prof Yaxye.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Caafimadka ee xukuumadda federaalka Soomaliya mudane Cismaan maxamed Cabdi Daalo ayaa ku bogaadiyay ardayda dhigata kuliyadda Caafimadka in mustaqbalka ay xil iska saaraan sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen horumarinta adeegyada caafimaad ee shacabka Soomaliyed u baahan yihiin.
“Waxaan qayaasayaa in qofku uu ku xisaab tami doono, 100 nuber ayaan maanta qaabilay ee halkii nuber waxaan maanta ku dhuftay labaatan doolar maalintii waxaan shaqeeyay laba kun oo doolar bishiina waxaan shaqqeyay lix kun ama shan kun oo doolar in wax noocas oo kala ah uu ku fikiro qofka dhaqtarka noqda haku xisaab tamin nuber haku xisaab tamina in aad lacag ka faaidaan caafimad
Caafimadka hadii aad lacag kas ameyso hadhow dib ayaad isugu daweyn doonta dadka Soomaaliyed ee dhibaateysan waxaa loo baahan yahay in aad u gar gaartan bulshada, waxaa loo baahan yahay in aad caawisaan dadkeena Soomaaliyed ee ku nool baadiyaha, waayo ma heystaan caafimad waad ogtihiin in hooyooyinkeena Soomaaliyeed ay maalin kasto baadiya ugu dhintaa umu lisa la’aan sabab too ah ma heystaan umulisa Taqa susleh marka waa in aad noqotaan arday ku fikireysa sidii aad berrito wax ugu qaban laheyden in aad tagtaan baadiyaha oo aad caawisan bulshada kunool baadiyaha” ayuu yiri Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda caafimaadka
Wasiir ku-xigeenka ayaa intaa ku daray in dhawaan magacaabi doonto Wasaaradda guddi baaritaan ku sameyn doono Tayada
waxbarsho ee kuliyadaha caafimadka ay bixiyaan Jaamacadaha kuyaala dalka,
“Wasaaradda Caafimad waxey sameyn doonta sharciga caafimadka dalka waxaa la dhisi doona guddiga caafimadka Qaranka waxey kala saari doonan Jaamacadee ah Jaamacad sax ah oo tayadeeda wanaagsan tahay si loo soo saaro arday taya leh, Wey sahlan tahay in Tabeelayaasha darbi lagu soo dhajisto oo lagu qorto magac Jaamacad hebel”.
Wasaaradda caafimadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaanahan waday qorshayaal lagu horumarinaayo adeegyada caafimad ee dalka,
Xubno ka tirsan Ururka haweenka Qaranka oo gaaray Cadaado ” Sawirro”
Xubno ka tirsan Ururka haweenka Qaranka oo gaaray Cadaado " Sawirro"